घरमा ल्याउनुहोस् चाँदीको हात्ती, हुनेछ धन प्राप्ति - Internet Khabar
घरमा ल्याउनुहोस् चाँदीको हात्ती, हुनेछ धन प्राप्ति
धन प्राप्तिका लागि तथा धनवान बन्नका लागि शास्त्रमा धेरै उपाय उल्लेख गरिएका छन् । शास्त्रमा उल्लेख गरिएका यी उपाय अवलम्बन गर्दा धनवान बन्नमा आइरहेका अडचनबाट पार पाउन सकिन्छ । यस्ता उपायले धनयोगलाई प्रवल गरिदिन्छन् ।
यो आलेखमा एउटा त्यस्तै उपायबारे उल्लेख गरिएको छ, जसललाई अपनाउँदा धनयोग प्रवल हुन्छ ।
हिन्दू धर्ममा हात्तीलाई एक पवित्र पशु मानिन्छ । किनकी यो पशुको सम्बन्ध विध्नहर्ता मानिने भगवान गणेशसँग छ । यसकारण हात्तीको पालन तथा पूजा गर्नु अत्यन्त शुभ मानिन्छ । यस्तो मान्यता छ कि हात्ती पाल्ने व्यक्तिले कहिल्यै धनको अभाव वेहोर्नु पर्दैन । तर अहिलेको समयमा यति धेरै ठूलो जनावर पाल्नु संभव छैन।
यसको विकल्पमा मानिसहरु चाँदीबाट बनेको हात्ती घरमा ल्याउने गर्छन्। चाँदीबाट बनेको हात्ती वास्तुशास्त्रका अनुसार धेरै शुभ मानिन्छ। एक त चाँदी अनि त्यसमा पनि हात्ती! दुईटैले सकरात्मकता ल्याउने काम गर्छन्।
चाँदीबाट बनेको हात्ती घर तथा कार्यालयमा राख्दा विभिन्न प्रकारका वास्तु दोष कम हुन्छन्। वास्तुशास्त्रमा कैयौं वास्तु दोषबारे उल्लेख गरिएको छ। यस्ता दोषका कारण व्यक्ति धनवान बन्ने संभावना पनि कम हुन्छ। यदि यी दोषलाई नष्ट गरिदियो भने घरमा लक्ष्मीको वास हुने मान्यता छ।
बझाङमा आज बिहानै लगातार दुई पटक भूकम्पको धक्का
आज बाला चतुर्दशी : पीतृको नाममा सतवीज छर्नेको पशुपतिमा घुईँचो
पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान पाकिस्तानका भावी प्रधानमन्त्री ?
टुक्राटुक्रा पारेर गाडिएको शिशुको शव फेला
प्रम ओलीले आज सम्बोधन गर्ने
February 15, 2017	 0	ज्योतिष शास्त्र अनुसार जीवनमा धनी हुने व्यक्तिको हात यस्तो हुन्छ – Astrological
जुत्ता बाँध्ने तरिकाबाट पनि सन्देश पठाउँथे जासूस, शीतयुद्धको रमाइलो कथा